ဖူးနုသဈ: Farmtown ကို အလညျအပတျ
Posted by ZT at 2:34 PM
Congratulation, happy married life!!
Your sis, Dubai
Congratttttsssss :D welcome on-board...
ဒီဇင်ဘာ နွားနို့ဆိုင် မှာ နာမည်ကြီးတာက နွားနို့ပါ။ အခု ဆိုရင် ပြင်ဦးလွင်မှာ ဒီဇင်ဘာနွားနို့ဆိုင်ခွဲ ၃ဆိုင်နဲ့ မန္တလေးမှာဆိုင်ခွဲ ၄ဆိုင်ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နွားခြံ စတော်ဘယ်ရီ ခင်းနဲ့ တွဲထားတာတော့ ဒီဆိုင်တစ်ဆိုင်ပဲရှိတာပါ။ခြံ အကျယ်ကြီးထဲ မှာ နွားမွေးပြီး(နွားကြွေးဖို့ စိုက်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားမြက် ခင်းလည် ရှိပါတယ်) ကိုယ့်ခြံက ထွက်တဲ့ နွားနို့ စစ် စစ်ေ၇ာင်းတဲ့သဘောပါ ပဲ။ ဒါပေမယ့် နို့ထွက်အားနဲ့ ၀ယ်အားမမျှတော့ လိုသလောက်ကို အပြင်က၀ယ်ဖြည့်ရတာပါပဲ။ သူ့ ဆိုင်ကနွားနို့က စစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးဈေးလည်း သူများဆိုင်ထက်ပိုပါတယ်။
စတော်ဘယ်ရီပေါ်ချိန်ဆိုရင် ဧည့်သည်က ခြံထဲဆင်း ကြိုက်တဲ့ အသီးရွေဆွတ်ပြီး ဖျော်ရည်ဖျော်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ Freshly Made လည်းဖြစ်ပြီး ပျော်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့် စုံတွဲတွေ အတွက်ပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ထင်ပါတယ်။caricature ပုံ အဆွဲ ခံချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဆိုင်မှာ caricaturist ရှိပါတယ်။
ပြင်ဦးလွင် ပျားရည်ဆမ်း ခရီးမှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ...း)
congratulations, ko ZT!
သော့ကနျြခဲ့တာ ကားတံကားကို လံယျလှယျကူကူ ပွနျဖှငျ့နိုငျလို့ဘဲ။ မဖှငျ့နိုငျရငျတော့ - သှားပါပွီ အပြျောခရီးလေးရယျ ---
အရှေ့က ပြင်ဦးလွင်သားဆိုသူပြောတာ ပြည့်စုံနေတော့
ကျနော် ဘာမှ မပြောလိုတော့ပါ။
ကျနော်အဖို့တော့ သူရဲ့ နောက်ကျောချင်းကပ်လျက်က ဂေါ်ရခါး နွားနို့ဆိုင်သေးသေးပဲ အမြဲထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
စိုက်ခင်းလေးတွေက လှတယ်.. နို့မလိုင်ကလဲ ကောင်းမယ့်ပုံပဲ.. ဒီတခါရန်ကုန်ပြန်ရင် မေမြို့သွားလည်မလို့.. အဲဒီနေရာကို ရောက်အောင်သွားဦးမယ်.. :)
Blog ကမပြည့်စုံသေးဘူး။ မင်းသား နဲ့ မင်းသမီး ပုံတွေတင်ဖို့ ကျန်သေးတယ်လေ။
နွားနို့သိပ်ကြိုက်လို့ ၂ခွက်တောင် သောက်ခဲ့တယ် ဟီး
ကားတံခါးကို တူနဲ့ဖွင့်နည်း ရလိုက်တာပေါ၊
ပြည်တော်ပြန်ဘုရား၊ ဘုံကျောင်းဝင်ပြီး ဆုတောင်းခဲ့ပါလား
ပြင်ဦးလွင်မှာ အတော်နေဖူးပေမယ့် အရက်ဆိုင်ပဲ စုံအောင် လျှောက်သောက်နေတာ ဆိုတော့ ဥာဏ်တော နားက ဒီဇင်ဘာနဲ့ မန်းလေးက ဒီဇင်ဘာ (င်္Friend လဘက်ရည်ဆိုင် ရှေ့ ။ ၇၃ လမ်းလားမသိ ) တော့ ထိုင်ဖူးတယ် ။ ကိုZT ပြောတဲ့လမ်းက ဆိုင်တော့ ဖြတ်သွားဖူးတယ် ။ ဒါပေသိ ၀င်မထိုင်ဖူးဘူး ။
စကားမစပ် ပျားရည်ဆမ်းက နွားနို့ဆိုတော့ အတော်အားရှိမှာနော ...